ANTENIMIERAM-PIRENENA : “Hametraka tantara vaovao ireo Depiote vao lany”, hoy ny Ffm
Ny talata faha-16 jolay ho avy izao no hiatrika fivoriana voalohany ireo solombavambahoaka nambaran’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana fa lany tamin’ny fifidianana notanterahina ny 27 mey lasa teo. 9 juillet 2019
Mandrapiandry izany dia maro tamin’izy ireo no nitodidoha avy hatrany namonjy sy nisaotra ireo vahoaka nifidy azy tany amin’ny toerana nilatsahany avy. Hita taratra sahady ao anatin’izany ny fahaizan’izy ireo manaja ny soatoavina maha Malagasy izay nohamafisin’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na ny Ffm, fa tokony hotandrovina mandrakariva. Nambaran’ny filoha lefitry ny Ffm avy amin’ny Faritanin’Antsiranana fa hametraka tantara vaovao ireo solombavambahoaka lanim-bahoaka ireo. Tokony hanjaka tanteraka ihany koa, hoy izy, ny fifanankalozan-kevitra mba tena ho lapan’ny demokrasia marina ny eny Tsimbazaza.
“Samy nanao ny adidiny ary samy hitandro toy ny anaka andriamaso ny sotoavina maha Malagasy, ny fihavanana sy ny fitoniana ka nahavitana tamin’ny antsakany sy andavany ny fifidianana. Voafidy tao anatin’ny maro ianareo noho ny faharesen-dahatry ny vahoaka tamin’ny toky nataonareo. Hijoro sy hiaro ny tombotsoa iombonana hisitrahan’ny vahoaka tsy vaky volo”, hoy ny filoha lefitry ny Ffm avy any Antsiranana raha nanome hafatra ireo solombavambahoaka vaovao. Nohamafisiny ihany koa fa noho izy nametrahan’ny vahoaka fitokisana dia tokony hananan’izy ireo mandrakariva ny fahavononana hamaly ny hetahetam-bahoaka. “Manan-danja loatra izany safidim-bahoaka izany, inoana fa tsy handraraka ilo mby an-doha ianareo fa hitana ny teny nomena ka hijoro sy haneho fahavononana hatrany ho mendrika amin’ny asa aman’andraikitrareo sy ny asa andrasana aminareo”, hoy hatrany izy.